Madaxweynaha Somaliland Oo Addis-Ababa Kula Kulmaya Dhiggiisa Soomaaliya, Raysal Wasaare Abiy Axmed Oo Dhex-Dhexaadinaya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Somaliland Oo Addis-Ababa Kula Kulmaya Dhiggiisa Soomaaliya, Raysal Wasaare Abiy Axmed...
Madaxweynaha Somaliland Oo Addis-Ababa Kula Kulmaya Dhiggiisa Soomaaliya, Raysal Wasaare Abiy Axmed Oo Dhex-Dhexaadinaya
February 20, 2019 (BRA-Hargeysa)-Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi iyo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmajo ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada Addis-Ababa ee dalka Itoobiya.
Kulankan oo uu soo qabqanqaabiyay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa haddii uu dhaco waxa uu noqonayaa kulankii ugu horreeyay ee Soomaaliya iyo Somailand ay yeesheen tan iyo sannadkii 2015-kii iyadoo hakad uu ku yimid wadahadallada labada dal.
Madaxweyne Farmaajo xalay gaadhay magaalada Jabuuti, halkaasoo uu kula kulmayo Madaxweynaha Jabuti Ismaaciil Cumar Geelle kahor inta aanu u ambabaxin magaalada Addis Ababa.
Lama oga ajandayaasha kulankan lagaga hadli doono hase yeeshee Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa hore ugu eedeeyay Madaxweyne Farmaajo inuu cunoqabatayn dhinac walba ah ku hayo Somaliland.
Madaxweyne Farmaajo ayaa toddobaadkii hore kulan gaar ah la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed xilli uu ka qeybgalayay Shir Madaxeedka Ururka Midowga Afrika.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa la filayaa in uu maanta u safro magaalada Addis Ababa, kaddib markii uu martiqaad uu u soo diray Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya.
Dalalka Turkiga, Jabuuti iyo Britian ayaa hore u waday dadaalada lagu doonayo in lagu dhex dhexaadiyo Somaliland iyo Soomaaliya, iyadoo shirar lagu qabtay dalalkaas.
Previous articleGanacsatada khaadka oo laba arrin dartood u joojin waayey khaadka KENYA kuna dhawaaqay war cusub
Next articleWasiir Faratoon Oo Ka Hadlay Xafiis Diblamaasiyadeed Oo KENYA Ka Furanayso Somaliland